China TEXTURED PHOTO PAPER ndị na-emepụta na ndị na-ebu ya | Aotia
Item aha:ederede ederede ederede
Arọ:260g / m² 300g / m²
Ụdị:Otu Fece na ihu abụọ
Tinye ka:Foto agbamakwụkwọ, foto akwụkwọ, foto nka, kaadị aha
Ink-jet ebi akwụkwọ bụ nnata ahụ nke ink si n'ọnụ nke ink-jet na ngwa nbipute nke na-edekọ ihe oyiyi ma ọ bụ ederede.
1. ezi ndekọ, ike ink absorption ike, ink absorption ọsọ, obere ink droplet dayameta, udi dị gburugburu;
2.fast ọsọ ọsọ, ya bụ, njupụta dị elu, ụda na-aga n'ihu, foto doro anya;
3.nchekwa ọma, ihuenyo nwere nguzogide mmiri, nguzo ọkụ, ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí nwere nchebe na ngwa ngwa ụfọdụ; (4) mkpuchi nwere ngwa ngwa na ike, mkpuchi adịghị mfe ọkọ, enweghị ọkụ eletrik na-enweghị atụ, ụfọdụ ogo nke mmịfe, ekwe, ekwe ịgbatị.
Dabere na njirimara ya, ink-jet akwụkwọ akwụkwọ nwere ike ekewa n'ime:
1.Casting mkpuchi: micron-ọkwa silicon dioxide usoro, nchapụta na whiteness nwere ike iru larịị nke omenala akwụkwọ, ma akwụkwọ isi bụ akwụkwọ isi;
2. Mgbasawanye: A na - ejikarị ihe polyene (PVA) eme ihe iji kpuchie mkpuchi Peng Run dị na mpempe akwụkwọ;
3. Micropore technology: RC ntekwasa akwụkwọ iji sịlịkọn dioxide usoro, e guzobere inorganic-organic ọtụtụ ihe mejupụtara urughuru ink obibi, ozugbo yiri cellular micropore absorption akpọ micropore akwụkwọ.Paper base na otu akwụkwọ isi dị ka akwụkwọ ọdịnala
Enwere ike iji akwukwo a mepụta Kaadị azụmahịa. Ọnụ ego ahụ ga-adịtụ ala ma ọnụahịa adịghị elu dịka PVC. Enwere ike iji ya dị ka Kaadị azụmaahịa na-abụghị nke magnetik ma ọ bụ dị ka ejiri aka mee akwụkwọ kaadị.
Nke gara aga: CRYSTAL FOTO AKWERKWỌ
Osote: Akwụkwọ ọlaedo na slider
Akwụkwọ ederede ederede
T-uwe elu Akwụkwọ, Kenkowaputa Photo ihennyapade Akwụkwọ, Black Photo Akwụkwọ, Akwụkwọ Mbipụta Maka Foto, Iron Akwụkwọ N'ihi Uwe, Piel Nyefee Akwụkwọ,